Line Production Mmepụta Mmepụta nke China (mmịpụta Artemisinin, mmịpụta CBD) na ndị na -eweta ya IVEN
Ahihia Mmepụta Production Line
Herb mmịpụta Production Line Okwu Mmalite:
Ihe ụtọ na ihe na -esi ísì ụtọ: akwụkwọ ụtaba, ihe oriri, isi kemịkalụ kwa ụbọchị, isi ụtọ.
Mwepụta ihe ọkụkụ: ahịrị mmepụta ahịhịa ọgwụ ọdịnala China, ọgwụ akụrụngwa iji mee ka nhazi ya mikwuo emie. Ọkpụkpụ: mmịpụta nke ọkpụkpụ, collagen ọkpụkpụ, ihe ụtọ na -eri.
Gbaa ụka nke ndu: injinịa mkpụrụ ndụ ihe nketa, injin cell, injin gbaa ụka, injinia enzyme.
1. Na nhazi mbụ nke akụrụngwa, site na ịcha, na -etipịa, nyocha na ụzọ ndị ọzọ, iji wee buo ibu nke ihe nkedo tupu, ngwugwu okpuru;
2. Dịka usoro dị iche iche si dị, họrọ usoro mwepụ nrụgide dị iche iche (mmịpụta ihe site n'ụzọ ihe si dị iche), site na otutu mmịpụta iji nweta ihe achọrọ;
3. slag ihe site n'ịgbanye ngịga ma ọ bụ ụzọ ịtụfu ihe, na -anakọta mapụtara;
4. Mgbe mmịpụta nke nzacha mbụ, site na igwe jụrụ oyi, ọgwụgwọ centrifugal ugboro ugboro, nweta mmiri mmiri ewepụtara;
5. Wepụ site ịta okpomọkụ dị ala, nkewa mmiri mmiri, nkewa ihe mgbaze mmiri, njupụta dị elu, itinye uche dị elu;
6. Itinye uche n'ihe site na ibugharịa mmeghachi omume, ịkwa osisi pipeline, nnabata sterilization, ịnweta ndị etiti;
7. Nke etiti site na njuputa, ịga ụlọ ọgwụ, ịnweta ngwaahịa mmiri mmiri; ma ọ bụ site na ihicha, egweri, wdg.
8. Ngwa dị mkpa iji teknụzụ dị elu, ngwa ngwa, mmegharị siri ike, ngwaahịa dị elu;
9. A na -emechi usoro usoro niile, uzuoku, mmiri ọkụ, mgbazigharị ihe mgbaze organic, ịchekwa ike, arụmọrụ dị elu, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nchedo gburugburu ebe obibi kwekọrọ na mmepe mba ụwa;
Dabere na usoro usoro ọdịnala, ọ nwere ike mata njikwa njikwa akpaaka nke usoro ahụ niile, hazie ngwa ihe nchọpụta niile nke usoro a chọrọ (ọnọdụ okpomọkụ, nrụgide, ọkwa mmiri, ọnụego na -asọba, valvụ njikwa akpaka, wdg), chepụta usoro njikwa akpaaka na-asọba yana usoro nhicha akpaka akpaaka CIP, họrọ ngwanrọ njikwa akpaaka dị elu, kwalite nkwụsi ike nke sistemụ ahụ, ma nwee ike iburu n'uche ụlọ njikwa etiti DCS;
A na -agbakwunye sistemụ njikwa ozi EMS dabere na akpaaka ogbako, yana data ogbako ahụ, data njikwa ihe, usoro nkwado ihe, njikwa ntọhapụ, nleba anya vidiyo nke ogbako, njikwa usoro yana ọdịnaya ndị ọzọ metụtara yana agbakwunyere na etiti, ka njikwa wee nwee ike. kerịta ozi omumuihe oge ọ bụla na ebe ọ bụla.
Nhọrọ valvụ akụrụngwa akpaaka na -akpaghị aka, na -eji ngwa ikuku dị elu iji guzobe netwọkụ nnyefe ikuku, dị iche na eriri wiwi eriri ọdịnala, ka nhazi ụlọ ọrụ wee dị mfe ma maa mma.
Nke gara aga: Multi Chamber IV akpa Production Lline
Osote: Nweta Mmepụta Peritoneal Dialysis Solution (CAPD)
Mwepụta CBD, igwe mwepụ ahịhịa, akụrụngwa mwepụ ahịhịa
Mmepụta ahịhịa ahịhịa extra mmịpụta Artemisinin
Igwe eji emejuola agịga, Igwe Ampoule À Coudre Led, Igwe Njuputa Ejuju Ejupụtara, Disposable ntụtụ & agịga Production Line, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Igwe Ampoule À Coudre Singer,